Su'aalaha La Weydiiyo | Tianjin Yixin tuuboyinka Qalabka Co., Ltd.
Su'aasha Badanaa La Is Weydiiyo
Q. Maxaa loogu magac daray dhuumaha mashiinka alxanka oo dhan?
J: Waxay ku xaqiiqsan kartaa alxanka otomaatiga ah meel kasta oo dhuumaha ka mid ah, sida alxanka korkiisa, alxanka jiifka ah, alxanka toosan, alxanka tooska ah, alxanka wareegsan ee alwaaxa, iwm, oo sidoo kale loo yaqaan robot-ka alxanka tooska ah ee dhuumaha. Waa mashiinka tooska ah ee alxanka dhuumaha ee horumarsan. Dhuumaha ayaa go'an ama wareegaya, oo tarooli alxanka dhaqaaqi karo si madaxbanaan si ay u ogaadaan alxanka si toos ah.
Q. Waa maxay dhexroorka tuubbada lagu dabaqi karo iyo dhumucda darbiga mashiinka?
J: Waxay ku habboon tahay dhexroorka tuubbooyinka ka sarreeya 114mm iyo dhumucda darbiga 5-50mm (HW-ZD-200 waxay ku habboon tahay in lagu xiro darbiga dhumucda 5-100mm).
Q. Weld-ka ma lagu ogaan karaa raajada iyo ultrasonic?
J: Haa, waxaad u baahan tahay inaad gacanta ku dhigto GTAW xidid ahaan, qalabkeenna si otomaatig ah ayuu u buuxin karaa una dabooli karaa. Nidaamka alxanka wuxuu u dhigmaa kormeerka sida ogaanshaha cilladda iyo filim duubista.
Q. Maxay yihiin qaabeynta qalabka oo dhan?
J: Jiilka shanaad ee dhammaan booska gawaarida gawaarida tooska ah, isha korantada laga keeno, fiilada siligga, xakamaynta wireless, tooshka alxanka iyo fiilooyinka kale (YX-150 PRO iyo HW-ZD-200 waxay iskuxireen tarooliinta alxanka leh sheyga alxanka).
Q. Mashiinka miyaa laga alxamayn karaa gidaarka gudaha?
J: Haa, dhexroorka tuubbada wuxuu u baahan yahay inuu ka weynaado 1 mitir, ama dhexroorka dhuumaha ayaa ku filan qofka shaqeeya inuu galo tuubada.
Q. Waa maxay gaaska iyo siligga alxanka ee loo adeegsado habka alxanka?
J: Waxaa ilaaliya 100% kaarboon laba ogsaydh ama gaas isku dhafan (80% argon + 20% kaarboon laba ogsaydh), siligga alxamduna waa mid cows adag leh ama qulqulaya.
Q. Maxay yihiin faa'iidooyinka marka la barbardhigo alxanka gacanta?
J: Waxtarka ayaa ka badnaan kara 3-4 walwal; tolmada alxanka ayaa si qurux badan loo sameeyay; isticmaalka alaabada la isticmaalo ayaa yar. Xitaa alxan leh macluumaadka alxanka aasaasiga ah si weyn ayuu u shaqeyn karaa, isagoo badbaadinaya qiimaha kireynta tiro badan oo xirfadlayaal weligood ah qiimo sare.
Q. Maayirka birlabta ee tarooliinta alxanka ma u adkeysanayaa heerkulka sare? Waa maxay awoodda xayeysiintu?
J: Waxaan ku tijaabinay jawi heerkulkiisu sareeyo oo gaaraya 300 °, mana jirin wax magdhaw ah, iyo soo jiidashada soo jiidashada ayaa wali sii wadi karta 50kg.
Q. Sidee ku saabsan samaynta alxanka sare?
J: Alxanka dusha sare waa nooca ugu adag ee alxanka ka mid ah afarta boos ee alxanka aasaasiga ah. Waxay leedahay shuruudo aad u sarreeya oo loogu talagalay xakamaynta birta dhalaalay, gaar ahaan alxanka kore ee hoose. Heerka u qalmida iyo sameynta waa dhibaatooyin farsamo. Dhuumaha Yixin qalabka alxanka otomaatigga ah wuxuu xallin karaa dhibaatooyinka la xiriira, qaabka alxanka waa mid qurux badan oo heerka u qalma ayaa sarreeya.
Q. Xaaladaheehee shaqo ayaa ku habboon alxanka biibiile otomaatig ah?
J: Gudaha ama goobta (goobta) howlaha dhismaha waa la codsan karaa; dhuumaha dhumucda weyn leh, tuubooyin waaweyn, tuubooyin bir bir ah, alxanka flange, alxanka suxulka, alxanka gudaha, alxanka dibedda, alxanka jiifka jiifka ah, iwm.
Q. Ma loo isticmaali karaa jawiga qalafsan ee banaanka?
J: Haa, waa mid adag oo waara, gaar ahaan wuxuu ku habboon yahay jawiga shaqada adag ee injineernimada dhuumaha.
Su'aal: Qalabku ma sahlan yahay in la shaqeeyo? Sidee loo tababaraa?
J: Rakibaadda ayaa ku habboon hawlgalkuna waa sahlan yahay. Waxaad ku bilaabi kartaa 1-2 maalmood gudahood haddii aad leedahay alxamid aasaasi ah. Waxaan ku bixin karnaa tababar khadka tooska ah ah ama xitaa tababar goobta iyo hagitaan ah.
Q. Ma jiraan wax shuruudo ah oo loogu talagalay deegaanka lagu shaqeynayo?
J: Goobta shaqadu waxay u baahan tahay meel 300mm ah oo ku wareegsan dhuumaha. Waxaa jira daaha ama lakabka dahaarka ee tuubbada dibedda, waxaa lagugula talinayaa inaad habeyso wadada. Tuubooyinka leh dhexroor tuubbo ka weyn 1000mm, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la habeeyo wadada, tarooliku si habsami leh ayuu u socdaa, tayada alxankuna waa ka sareeysaa.
S. Jirka taangiga mala xiri karaa? Alxanka jiidaha hoose ee tuubada ma istaagi karaa?
J: Haa, alxanka toosan ama toosan waa macquul.
Q. Maxay yihiin waxyaabaha sida caadiga ah loo isticmaalo iyo qaybo xidhashada?
J: Isticmaalayaasha: silig alxamid ah (silig alxama oo adag ama silig alxanka qulqulaya), gaas (kaarboon laba ogsaydh ama gaas isku jira); qaybaha nugul: tilmaamaha xiriirka, biiyaha, iwm (dhammaan qaybaha caadiga ah waxaa laga heli karaa suuqa qalabka).
S: Waa maxay nooca siligga aad isticmaasho? (dhexroor, nooca)
A: silig qulqulaya: 0.8-1.2mm
S: Mashiin kasta oo wajahaya mashiin loo baahan yahay si loogu diyaariyo biibiilaha biibiile?
J: Uma baahnid.
S: Alxanka, nooca wadajirka ah ayaa loo baahan yahay (U / J double J / V or bevel joints?)
Q. Waa maxay mugga iyo culeyska tarooli alxanka?
J: tarooli alxanka waa 230mm * 140mm * 120mm, miisaanka tarooli-na waa 11kg. Naqshadeynta guud waa mid khafiif ah oo dabacsan si loo qaado / loo shaqeeyo.
Q. Waa maxay xawaaraha lugaha iyo ballaca tarooli ee alxanka?
J: Xawaaraha luliddu waa mid si isdaba-joog ah loogu hagaajin karaa 0-100, iyo ballaca luliddu waa mid si joogto ah loogu hagaajin karo 2mm-30mm.
S. Maxay yihiin faa'iidooyinka qalabka alxanka dhuumaha otomaatiga ah ee Yixin?
J: Shirkaddu waxay diiradda saartay R&D iyo soo saarista qalabka dhuumaha tooska ah ee alxanka wax ka badan 12 sano, waxayna ka gudubtay imtixaankii macaamiisha iyo suuqa. Shayga ayaa soo maray 5 jiil oo casriyeyn ah. Waxqabadka qalabka alxamida dhuumaha cusub waa mid deggan, heerka u qalmidda alxamiddu waa sarreysaa, tolidda walxaha waa qurux badan tahay. Waxaa ku dayasho badan suuqa. Fadlan indhahaaga fur oo isbarbar dhig tayada.
ma dooneysaa xal habeysan?